नेपालले इन्टरनेटमा भारतको एकाधिकार तोड्दै औपचारिकरुपमै व्यावसायिक सेवा शुरु गरेपछि भारतमा सुरुभयो रुवाबासी ! , हेर्नुस कसले के भने ? « Light Nepal
नेपालले इन्टरनेटमा भारतको एकाधिकार तोड्दै औपचारिकरुपमै व्यावसायिक सेवा शुरु गरेपछि भारतमा सुरुभयो रुवाबासी ! , हेर्नुस कसले के भने ?
Published On : 13 January, 2018 3:29 pm
काठमाडौं – नेपालमा चिनियाँ ईन्टरनेट सेवाको उद्घाटन भएपछि भारतमा भने यस विषयलाई लिएर चर्चा सुरु भएको । भारतीय सञ्चारमाध्यममा समेत यसले मुख्य स्थान पाएको छ । भारतको चर्चित नव भारत टाईम्सले नेपालमा चिनियाँ ईन्टरनेटको शुभारम्भ भएको विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ ।
मेरी बास्सैकी भुनियाँलाई यस्तो रोग लागेपछि । डाक्टरले नै सेक्स गर भने (भिडियो सहित)
काठमाडौँ – कुनै समयकी चर्चित अभिनेत्री हुन्, हरिशा बानिया । हरिशा बानिया भुनियांको नामले पनि